Wareejintii Xisbiga Kulmiye ma dildilaac hor leh buu ku keenayaa Jeegaantii? – WARSOOR
Wareejintii Xisbiga Kulmiye ma dildilaac hor leh buu ku keenayaa Jeegaantii?
Arrinta wareejinta xisbiga Kulmiye ee xilligan waxay la xidhiidhaa ololaha Madaxweyne Biixi ugu jiro inuu darbaddii labaad ee u xaqa u lahaa isa soo sharaxo.Mudane Biixi wuxu tallaabadan ku beegsanayaa inuu dhayo dildilaaca xooggan ee ku yimi jeegaantii kursiga saartay. Xisbiga oo ay ahayd inuu wareejiyo markii uu doorashada ku guulaysto ma uu yeelin. Taasina ka mid bay ahayd waxa dildilaaca jeegaanta sababay, inkastoo aanay tan keliya ahayn.
Qaabkan madaxweynuhu xisbiga u wareejiyey waxay Khalkhal gelin kartaa beelweyntii Bariga Burco oo ay u yaalleen is-afgardyo ku saabsan hoggaaminta xisbiga ee beesha, madaxweyne Siilaanyo ka dib.Markuu xaalku sidan yahay, Madaxweynaha iyo xulafadiisii Bariga Burco-ba way ku khasaari karaan tallabadan. Madaxweynuhu wuu ku khasaarayaa oo dad iminka la socda buu ku waayi karaa.Beeshuna way ku khasaari kartaa oo midnimadii ay ku caan baxaday bay ku waayi kartaa. Balse balse…
Madaxweynaha. Madaxweynuhu waa murashax, wuuna yaqiinsaday inuu daweeyo dildilaacii jeegaanta ku yimid, waxan kula talin lahaa in aanu uga sii darin oo qaadin tallaabooyin si didiya kuwa iminka la sii jooga.
Cabdiraxman Yuusuf Cartan
Nuxurka Qodobadii lagaga hadlay Shirkii Maxamed Kaahin Iyo qaar ka mid ah Waxgaradka Beeshiisa